Kudeta Anosy : Nampiteny ny gitarany i Teta -
AccueilVaovao SamihafaKudeta Anosy : Nampiteny ny gitarany i Teta
Anisan’ireo andrarezina. Nampiteny ny gitarany i Teta ny sabotsy alina teo tetsy amin’ny Kudeta Anosy. Nahafantarana ity mpanakanto avy any Ampanihy ity hatramin’izay, ny fahaizany mifehy sy mitrandraka ireo gadona nentin-drazana Mahafaly, amin’ny alalan’io zava-maneno misy tadiny 6 io, ka ao anatin’izany ny gadona Tsapiky. Ao anatin’ny fitrandrahana nataony sy nanaitra ireo vahiny maro tany ivelany ny fampivadiana izany amin’ny blues. Anisan’ny mbola novoizin’i Teta tamin’io seho io, ireo hira miresaka ny zava-misy sy fiainan’ny foko niaviany. Ao anatin’izany ireo fomba nentin-drazana sy ny finoana, ny vola, ny tany, ny ranomasina, ny fitiavana, ny tsy fitoviana ara-tsosialy… Anisan’ireo nampitsangana sy nampandihy ireo tonga teny an-toerana ny « Inay Aka raha iny », « kabary »…
Nandritra io seho io ihany koa no nampahafantarana ny zava-pisotro vaovao novokarin’ny Star, dia ny « Booster apple mix », izay efa hita teny an-tsena nanomboka ny 13 aogositra. Zava-pisotro vokatry ny fikarohana vaovao, mba hanampiana ireo tia mampifanapoka ny alikaola sy ny zava-pisotro somary mamy.